काठमाडौं, २२ साउन । कोरोना भाइरस संक्रमण समुदायबाट समूह समूहमा फैलिन थालेको छ । पछिल्ला केही दिनयता संक्रमण समूह समूहमा देखिँदै गएपछि यसको जोखिम पनि सोही रूपमा बढ्न थालेको हो । पछिल्लो २४ घण्टायता...
प्लाज्मा थेरापी के हो? यसले कसरी काम गर्छ?
विगत केही समयदेखि सारा विश्व नै अधीरताका साथ जुन कुराको प्रतीक्षा गरिरहेको छ, त्यसलाई वर्तमान युगको संजीवनी बूटीको दर्जा एवं मानसम्मान दिँदा शायदै कसैलाई आपत्ति होला। गत वर्षको नोभेम्बर /डिसेम्बरद...
काठमाडौं – कोरोना भाइरस संक्रमण समुदायबाट समूह समूहमा फैलिन थालेको छ । पछिल्ला केही दिनयता संक्रमण समूह समूहमा देखिँदै गएपछि यसको जोखिम पनि सोही रूपमा बढ्न थालेको हो । पछिल्लो २४ घण्टायता थप पाँच ...